Prof. Axmed Samatar Oo Faah-faahiyay Hungadii uu kala soo noqday Soomaaliya | Somaliland.Org
Prof. Axmed Samatar Oo Faah-faahiyay Hungadii uu kala soo noqday Soomaaliya
December 18, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Prof. Axmed Ismaaciil Samatar oo ka mid ah shakhsiyaadka ka ridoobay Somaliland ee u golon golay fikirka Soomaali weyn, ayaa markii u horaysay warbaahinta tafaasiil ka siiyay qalbi jab iyo niyad xumo uu ka soo qaaday Soomaaliya oo uu ka mid ahaa murashaxiintii ku guul-daraystay tartankii doorashadda Madaxtinimadda Soomaaliya.
“ Anigu waxaan dalka ka soo noqday aniga oo qalbi jabay, kamaan soo fasax qaadan baarlamaanka ee tigidhkayga ayaan iska soo goostay oo waan iska soo baxay, waxaan uga soo noqday qalbigaygii oo hoos u dhacay, laba amuuroodna hoos waa uu ugu dhacay,”ayuu yidhi Prof. Samatar oo dhawaan khudbad u jeediyay Soomaalida Minnesota ee dalka Maraykanka.
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu yidhi “waxa qalbigayga jabintiisa kamid ahaa markii ugu horaysay noloshayda anigoo lixdankii madaxa galiyay soddan sanadoodna dalka wax ka qoraayay, Waxaan soo arkay marka ay timaado dabaqada siyaasada maaha dadka caadiga ahe, waxaan soo ogaaday layguna yidhi inaan ahay qof reer waqooyi ah, oo marka lays gudo galo ee la wada hadlo ee hoggaaminta iyo waxaas laga hadlo ee meel loo dhaqaaqo la waayo lagugu odhanaayo idinku waad maqantihiine hadalka naga daaya. Sheekada soo kulaal oo halkaas soo fadhiiso laakiin gunta hasoo galin taas waan soo ogaaday.”
Axmed oo sii sharaxaya waxyaabaha ka yaabiyay wuxuu yidhi “Waxaan soo ogaaday in ay leedahay laba jaranjaro, jaranjarada hore waxa weeye mid loo garaabi karo waayo degmada aan ka imid ee Somaliland waan baxnay ayaa la yidhi, anigu waxaan aaminsanahay dadka degmadaas ku nooli wax badan ayay qabsadeen oo wanaagsan, haddii aan la garan oo aan la qirin oo aan meel walba laga sheegin wanaaga ay qabsadeena layskuma soo noqon karaayo.”
Previous PostWaalidiinta Ardayda Abaarso Tech oo beeniyay Dhaqan-xumo lagu sheegay inay ka jirto DugsigaasNext PostShir Ku saabsan samaynta diiwaangelinta madaniga ah oo lagu qabtay Hargeysa	Blog